Mr. Ndopuyo, The kasị ọhụrụ Pool Okpomọkụ mgbapụta na Interbad 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. Ndopuyo, The kasị ọhụrụ Pool Okpomọkụ mgbapụta na Interbad 2018
Mr. Eco-DC Inverter Steel Pool Okpomọkụ mgbapụta
Ọ bụ ihe mbụ anyị oge ịga Interbad na Stuttgart, Germany. Ekele unu niile na-ewere oge gị ileta anyị ụlọ ndò. Ọ bụ oké ohere iso na-agbanweta na echiche na ahụmahụ banyere inverter ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta na n'ụwa nile ahịa. Anyị bụ ndị kasị ekele maka ha mmasị na anyị pụrụ iche slab imewe inverter - Mr. nkịtị.
Mr. nkịtị bụ kasị ọhụrụ ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta ke ofụri ngosi. Ọ na-e-ọma ghọtara site ahịa si mba dị iche iche na show. Ọtụtụ iwu ekwenyela na ntụpọ, nke ume nke ukwuu anyị.
Gịnị bụ Mr. nkịtị kasị ọhụrụ ngwaahịa?
Ekele anyị ulo oru na-emepụta. Ọ bụ a omiiko otu onye chọrọ ike uru maka ndị ahịa anyị na-azụ. Simple classic aka njikwa, ubi friendly ewepụghị elu imewe ... bụla zuru ezu na-eje ozi n'ihi na dị nnọọ otu ihe: ime ka ndị ahịa ahụmahụ ndị kasị mma. Mgbe na-aga n'ihu njikarịcha na ọhụrụ na-anwa, a kasị ọhụrụ ngwaahịa e mesịrị mụọ, nke ọma gbanwere stereotypes nke omenala inverter ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta.
Ọzọkwa, anyị na-ọma ofu na-ekewaghị ekewa onye na Germany n'oge show. Nke ahụ pụtara na obodo na-ere ahịa na ọdọ mmiri shop nwe ike ịzụta Mr. nkịtị na na Germany! Ọ bụrụ na i nwere mmasị na Mr. nkịtị ma ike izute anyị na Interbad, ọ bụghị uche anyị na-esote show, Piscine Global Europe 2018 na Lyon, France. Abịa na ekwu okwu ka anyị na-eche ihu na ihu, ị ga-amụtakwu banyere Mr. nkịtị na anyị inverter ezinụlọ.
Ka anyị enwetaghị ihe INVERTER ohere ọnụ, ịhụ gị na ụlọ ndò 5D126 na Lyon!
Post oge: Oct-31-2018